रविन्द्र मिश्रको प्रश्न : न्यायालय बिगारेको प्रधानन्यायाधीशले कि नेताले, त्यो चिन्नुपर्दैन ?
काठमाडाैं | कात्तिक ९, २०७८
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले न्यायालय बिगारेको प्रधान न्यायाधीशले कि नेताले भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सबैतिरबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग भइरहँदा उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।
संयोजक मिश्रले मंगलवार बिहान एक ट्वीट गर्दै न्यायालय बिगारेको प्रधानन्यायाधीशले कि नेताले त्यो चिन्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्,'प्रधान न्यायाधीशमाथि कारवाही गरूँ तर सारा विकृतिको मूल कारक के हो चिन्नु पर्दैन ?'
यस्तो छ उनको ट्वीट
शेयरधनीको खातामा नगद पठाउँदा विवरण खुलाउन सेबोनको निर्देशन